Beelaha ay kasoo jeedaan xubnihii Aqalka hoose ee loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beelaha ay kasoo jeedaan xubnihii Aqalka hoose ee loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga
Guddiga doorashada dadban ee heer federaal ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay bixinta kaararka aqoonsiga iyo shahaadooyinka xildhibaanada aan dacwad ka taagneyn ee lasoo doortay, iyadoona ay haatan soo baxayaan xildhibaano hore loo doortay oo loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga.
Ilo xog-ogaal ah oo ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in 5 ka mid ah xildhibaanadii dhawaan lagu soo doortay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud loo diiday in shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga la siiyo.
Arrintaan ayaa sida la sheegayo keentay inuu khilaaf weyn soo kala dhex galo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kan Galmudug ee ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Cadaado.
Hadaba 5-ta xildhibaan ee loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo sidoo kale kaararka aqoonsiga ayaa ka ah sida soo socoto:-
Beesha Habargidir 2 kursi ayaa loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga.
Beesha Murusade 2 kursi ayaa loo diiday in la siiyo shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga.
Beesha Sheekhaal/Loobage 1 kursi ayaa loo diiday in la siiyo shahaadada iyo kaarka aqoonsiga.
Dhinaca kale, guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka ayaa dhawaan shaaciyay inaysan shahaadooyin iyo kaarar aqoonsi siin doonin xildhibaanada doorashadooda aan si xalaal ah lagu soo dooran islamarkaana dacwadaha laga soo gudbiyay.